आदिवासी थारूहरू सीमान्तकृत भएको नालीबेली दर्शाउने कला प्रदर्शनी · Global Voices नेपालीमा
"नेपालमा थारूहरूको इतिहास किन सधैं अँध्यारोमै राखियो?"
अनुवाद पोष्ट गरिएको 10 सेप्टेम्बर 2020 15:40 GMT
यो लेख पढ्नुहोस् Français, Ελληνικά, Nederlands, Español, русский, English
नेपालमा केही जाति तथा समुदाय सीमान्तकृत पारिएका छन् र यो क्रम जारी छ। तीमध्ये नेपालकै चौथो ठुलो समुदायका थारू पनि एक हुन्। थारू कलाकार लवकान्त चौधरीले थारू जातिको सीमान्तकृत इतिहासका नभनिएका र नलेखिएका कथाहरू आफ्नो कला प्रदर्शनी ‘मसिन्या दस्तुर ’ मार्फत भन्ने जमर्को गरेका छन्।
चौधरीले आफूले भाग लिएको छ महिने कला अनुसन्धान परियोजनाबाट आफ्नो आँखा खुलेको अनुभव गरे र त्यसले आफ्नो समुदायबारे व्याप्त रहेको एकतर्फी जनधारणाबारे घोत्लिन बाध्य गराएको उल्लेख गर्छन्।
लवकान्त चौधरीः मेरा कलाकृति थारूहरूको विस्थापन र प्रतिरोधका वरिपरि घुमेका छन् र यस समुदायले राज्यबाट खेपेको विभेद्बारे बोल्छन्। राज्यद्वारा मुलुकी ऐन (मुलुकी ऐन १८५४) अन्तर्गत थारूसमेत कैयन् जातिलाई मसिन्या मतवाली भनी वर्गीकरण गरिएको थियो जसको शाब्दिक अर्थ किनबेच हुने वा दास-दासी बनाउन पाइने मद्यपान गर्ने जाति हुन्छ। प्रतिस्ठापन कला मसिन्यामा १३ वटा घैला (माटाको भाँडा) रहेका छन् जसमा विभिन्न कालखण्डबाट लिइएका अक्षर कुँदिएका छन्। घैलामा नेपाल एकीकरणको श्रेय पाएका राजा पृथ्वीनारायण शाहका उक्तिदेखि लिएर नेपालको संविधान २०७२ सम्म कुँदिएका छन् – ती सबैले आदिवासी समुदायलाई सीमान्तकृत गर्न सहयोग पुर्याएका छन्।
‘तमसुक’ श्रृंखलाले थारूका सुनियोजित सीमान्तीकरणको कथा बताउँछ। निरंकुश शासकहरूको शासनकालमा थारूहरूका भूमि विभिन्न शाही प्रशासकहरू तथा नोकरशाहहरूलाई बाँडियो तथा बक्सिस दिइयो, जसले थारूहरूलाई आफ्नै ठाउँमा भूमिहीन बनायो। कमैया र कमलरी प्रथा लागू गरियो जसले थारू पुरुष, महिला र उनीहरूका बच्चाहरूलाई जिन्सी वस्तुको रूपमा किनबेच गर्न सकिन्थ्यो।
संजीव चौधरीः तपाईंले एउटा भिन्न र कम आकर्षक विषयवस्तु, कीटनाशक विषादीलाई तपाईंको ‘डीडीटी’ शीर्षकमा कलाकृतिको लागि सृजनात्मकताको रूपमा रोज्नु भएको छ। किन तपाईंले यसलाई छनौट गर्नुभयो?
५० र ६० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा नेपाल सरकारले तराइ क्षेत्रमा औलो उन्मूलन अभियानको नेतृत्व गर्यो। जसको कारण पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको ठूलो संख्या तराइमा बसाइँ सर्यो र यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वन फँडानी गरियो। डीडीटी छर्नाले औलो र एनोफिलिस लामखुट्टेको मात्र उन्मूलन गरेन थारूहरूलाई उनीहरूको आफ्नै भूमिमा अल्पसंख्यक बनायो। यस चित्रमा मैले मानव चित्रसहित विभिन्न वस्तुहरू चित्रित गर्न थारू भित्ते चित्रकला प्रविधि प्रयोग गरेको छु। प्रत्येक चित्र लगभग लामखुट्टेको समान आकारका छन्।
संजीव चौधरीः तपाईं टीकापुर घटनाको बारेमा अत्यन्त स्पष्टवादी हुनुहुन्छ र मूलधारको मिडियाले वास्तविक कथाहरू नसमेटेका दावी गर्नुहुन्छ। ‘असमानताको भूमिका नागरिकहरू श्रृंखला’ले के भन्छन्?
लवकान्त चौधरीः मेरो कलाकृति ‘डायरी: दमनको नाङ्गो सत्य’ ले एकजना थारू पत्रकार, लेखक एवं क्रान्तिकारी जोखन रत्गैँयाको कथा बताउँछ। मैले काठमा शब्दहरू र तस्वीरहरू कुँदेर उनको डायरी पुन: सिर्जना गरेको छु। ११ जुन, २००१ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले जनयुद्धको समयमा जोखनको हत्या गरेको थियो। यस श्रृंखलाले त्यस अवधिको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ। यो नेपाल सरकारबाट सुदूरपश्चिम नेपालका थारूहरूले सामना गरेको अस्थिरता र हत्यामा आधारित छ। सरकारद्वारा मानिसहरूलाई गिरफ्तार गरियो, हत्या गरियो, र बलपूर्वक बेपत्ता पारियो जसलाई “अपरेशन किलो सेरा २” भनेर चिनिन्छ।
लवकान्तका केही कलाकृतिहरू उनको इन्स्टाग्राम पृष्ठमा हेर्न सकिन्छ।